Myanmar IT Resource Forum » ARTICLES ZONE » » Article Page » Gmail ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေ[Article]
Email အသစ်တွေ ရောက်နေတာကို ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ ။
on 24th March 2010, 8:57 am by ET
2> Email အသစ်တွေ ရောက်နေတာကို ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ ။
IE နဲ့ Firefox အတွက် အသုံးဝင်တဲ့ toolbar ကို
မှာ အခမဲ့ရနိုင်ပါတယ်။ System tray ထဲမှာ ၀င်ရောက်ပြီး
Addons တစ်ခုအနေနဲ့ အလုပ်လုပ်ပြီး Gmail-inbox (7)
အဲဒီလိုပြသပေးပါလိမ့်မယ်။ message ရဲ့အတိုချုပ် ' subject '
ကိုတောင် ဖတ်လို့ရပါတယ်။ (gmail notifier လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။
google ကပေးတဲ့ Notifier နဲ့တခြား developer တွေက တီထွင်ထားတဲ့
Gmail Notifier ပေါင်း များစွာကို
မှာ ရနိုင်ပါတယ် ။
လုံခြုံရေးပြည့်ဝတဲ့ connection ကိုသုံးပါ။
on 24th March 2010, 9:37 am by ET
3> လုံခြုံရေးပြည့်ဝတဲ့ connection ကိုသုံးပါ။
Gmail ကို Access လုပ်ဖို့ နည်းလမ်းအမြောက်အမြားရှိတဲ့
ဟာ secure socket
layer နည်းပညာနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ လုံခြုံရေး အပြည့်ဝဆုံး website
Re: Gmail ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေ[Article]
on 24th March 2010, 5:53 pm by C0D3R
အီးတီလေး ကောင်းတယ်ကွ နော်လည်းတင်ဦး သိတာတွေ ဟီး
on 25th March 2010, 12:59 pm by moeset
on 25th March 2010, 1:46 pm by kyawzwathant
on 26th March 2010, 8:25 am by solakoko
Gmail ကိုအမျိုးမျိုး ၀င်လို့ ရတယ်လေ
နဲ့ ဝင်တော့ ပေါ်တာပါ
ရိုးရိုး google>Gmail>http အနောက်မှာ s ထည့်ပြီးဝင်တာ
သူများသုံးပြီးတော့ sign out လုပ်ထားတာကို ၀င်တာတို့ ..
Proxy တွေပြောင်းပြီး ကျော်ခွ ၀င်တာတို့ .
software တွေနဲ့ ကျော်ခွပြီးဝင်တာတို့ ...ပေ့ါ
on 26th March 2010, 11:21 am by kyawzwathant
GMail ရဲ့ setting ထဲမှာသွားပီး Browser connection ကိုဒီလိုလုပ်ရင် လုံခြုံစိတ်ချရပီပေါ့နော်
on 26th March 2010, 11:50 am by kyawzwathant
Official Gmail Blog မှာရေးထားတာပါ........
on 27th March 2010, 1:14 pm by mars
ကျနော်သိချင်တာက Gmail မှာ mail ပို့တာကို အချိန်သတ်မှတ်ပြီး ကိုယ့်ပို့ချင်တဲ့အချိန်မှာပို့ပေးတဲ့ auto send ဆိုတာမျိုးများပါလားမသိဘူး... မပါဘူးဆိုရင် အဲလိုအနေအထားနဲ့ပို့ချင်ရင် ဘယ်လိုပို့ရလဲဆိုတာကို သိချင်လို့ ပြောပေးပါဦးဗျာ... ဒီမှာနည်းနည်းလေး တိုင်ပတ်နေလို့... ဥပမာ.. ကျနော် ကြာသပတေးနေ့တိုင်းစာပို့ချင်တယ် ဆိုပါစို့... ကြာသပတေးနေ့ကို မအားဘူးဆိုရင် အဲဒိနေ့အတွက် စာကို သူ့အလိုလိုပို့ပေးတဲ့ service မျိုးရှိလားလို့ သိချင်တာပါ... ပြောပေးပါဦးနော်...
on 27th March 2010, 5:56 pm by solakoko
Gmail>setting>၀င်ပြီးတော့ Vacation responder: ဆိုတာကို on ပေးပြီးတော့
အောက်က First day မှာ ဘေးက အကွက်ထဲကို ကလစ်နှိပ်ပြီး ကိုမားစ် မရှိတဲ့ နေ့ ကိုရွေးပေးလိုက်
Message မှာလဲ ပို့ မဲစာတွေကြိုရေးထားလိုက်လေ
အားလုံးပြီးရင် save change လုပ်လိုက်ပေါ့
မေးလ် ကိုကြိုပို့ လို့ ရတယ်လို့ တောကြားဖူးသလိုပဲ
ဒါပေမဲ့ ရှာပြီိး မစမ်းသပ်ဖူးသေးပါ
on 27th March 2010, 6:07 pm by C0D3R
Gmail ကနေကိုယ်ပို့လိုက်တဲ့စာကိုဖတ်ပြီးပြီးလားဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ပြီးသိနိုင်မလဲဆိုတာ ဆွေးနွေးရအောင်
on 27th March 2010, 6:12 pm by solakoko
ကပို့ ရင် ဖတ်ပြီးတဲ့အကြောင်းပြန်ပေးတယ်ဆိုလားပဲ
on 27th March 2010, 6:18 pm by C0D3R
အင်း အဲဒါက အလုပ်လုပ်ပါတယ် ဒါပေမယ့် သူက link ကိုနှိပ်မှရမှာ ကျွန်တော်စမ်းတာပေါ့လေ
အစ်ကိုတို့မှာကော ဒီလိုဖြစ်လား ဖွင့်လိုက်ရင်သိပြီလား ဆိုတာဆက်ပြောပါဦး
on 27th March 2010, 6:24 pm by solakoko
Gmail ကနေ စမ်းဖို့ တော့မလွယ်ဘူးဗျ
သူက file တော့ အနည်းဆုံး တစ်ခုလောက်ပို့ ရတယ်..
ပို့ မယ့်သူလိပ်စာရယ်..ကိုယ့်လိပ်စာရယ် ရေးပြီး file တစ်ခုလောက် upload တင်ပြီးပို့ လိုက်ရင်ရပြီ
အပို့ ခံရတဲ့သူက ကိုယ်ပေးတဲ့ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီဆိုတာနဲ့ကိုယ့်ဆီကို Delivery Notification
on 27th March 2010, 6:30 pm by C0D3R
အဲ မဒေါင်းပဲ့ကြည့်ပြီး ပြန်ထွက်သွားမယ်ဆိုရင် မသိတော့ဘူး
အဲဒီနည်းလေးကိုလုပ်လို့ရမယ့်နည်းရှိရင် ဟိး ဟိး ကျွန်တော်လည်းအချိန်မရလို့သေချာမလုပ်ကြည့်သေးဘူး
on 27th March 2010, 7:12 pm by mars
ကျေးဇူးပဲ ကိုဆိုလာ... ကျနော်စမ်းကြည့်လိုက်ဦးမယ်.. မရရင်တော့လည်း ထပ်ပြီးကြိုးစားပေးပါဦးနော်... ရဖို့တော့များတယ်... အကိုလုပ်ခိုင်းသလိုသာဆိုရင်လေ... ကှေးဇူးဗျာ..
on 27th March 2010, 7:28 pm by mars
Gmail>setting>၀င်ပြီးတော့ Vacation responder: ဆိုတာကို
ကျနော်ရှာလို့မတွေ့ဘူးဖြစ်နေတယ်... လုပ်ပါဦးဗျို့... ကျနော်ရှာတာနေရာလည်းနှံနေပြီ... help နဲ့မေးတော့လည်း သူက general အောက်မှာပဲရှိတယ်ပြောတယ်.. ကျနော်ရှာလို့မတွေ့တော့ဘူး... ဖြစ်နိုင်ရင် printscreen နဲ့ပို့ပေးပါလားဗျာ...
on 27th March 2010, 7:52 pm by kyawzwathant
mars wrote: ကျနော်သိချင်တာက Gmail မှာ mail ပို့တာကို အချိန်သတ်မှတ်ပြီး ကိုယ့်ပို့ချင်တဲ့အချိန်မှာပို့ပေးတဲ့ auto send ဆိုတာမျိုးများပါလားမသိဘူး... မပါဘူးဆိုရင် အဲလိုအနေအထားနဲ့ပို့ချင်ရင် ဘယ်လိုပို့ရလဲဆိုတာကို သိချင်လို့ ပြောပေးပါဦးဗျာ... ဒီမှာနည်းနည်းလေး တိုင်ပတ်နေလို့... ဥပမာ.. ကျနော် ကြာသပတေးနေ့တိုင်းစာပို့ချင်တယ် ဆိုပါစို့... ကြာသပတေးနေ့ကို မအားဘူးဆိုရင် အဲဒိနေ့အတွက် စာကို သူ့အလိုလိုပို့ပေးတဲ့ service မျိုးရှိလားလို့ သိချင်တာပါ... ပြောပေးပါဦးနော်...
ဒီမှာသွား ကြည့်လိုက်ပါ ပို့ချင်တဲ့အချိန်ကို သတ်မှတ်ပီးပို့လို့ ရပါတယ်
on 27th March 2010, 8:00 pm by kyawzwathant
on 27th March 2010, 8:21 pm by mars
ဟားဟားဟား.... ကျနော့်ဆီမှာက ဒီလိုပေါ်နေတာကိုးဗျ... ကျနော်လည်းရှာလိုက်ရတာ.. မူးသွားကော.. ဒါနဲ့ ဒီကောင်က အချိန်နဲ့မေးပို့တယ်ဆိုတာဟုတ်လား... ကျနော်ထင်တာ.. auto reply ပုံစံမျိုးလားလို့... တစ်ချက်လောက်ဆွေးနွေးပေးပါဦးဗျ... အကိုပေးတဲံ အပေါ်က
ကတော့ ကျနော်စမ်းကြည့်နေတုန်း... မသိသေးဘူး.. သူက ကိုယ့်မေးကနေပို့တယ်ဆိုတာကိုရော သိလား.. ကျနော်လိုချင်တာက ဖြစ်နိုင်ရင် တစ်ဆင့်ခံနဲ့မလိုချင်ဘူး.. Direct ပဲလိုချင်လို့ပါ... ဟီး... ကူညီတာကျေးဇူးပါဗျာ...
on 28th March 2010, 10:35 am by solakoko
ကို mars ရေ...
အဲဒီိလိုလုပ်လို့ ရတယ်ဆိုတာ ဖတ်တော့ဖတ်ဖူးသလိုလိုရှိလို့ .ပြန်ရှာကြည့်တာ ဒီအောက်မှာတွေ့ တယ်ဗျာ
ကျနော်လဲ သုံးရအောင်လို့ 
'Lables' များကို အသုံးချပါ။
on 30th March 2010, 12:47 pm by ET
gmail ရဲ့ label ဟာ 'folder' ပါပဲ။ အစုလိုက်၊ အဖွဲ့လိုက် folder တွေ
တည်ဆောက်ထားလို့ရပါတယ်။ Label နဲ့ folder မှာမတူညီတဲ့ အချက်တွေ
အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် '(my friends)' ဆိုတဲ့ 'folder' မှာ သူငယ်ချင်း
တွေရဲ့စာတွေကို ထည့်ထားလို့ရပေမယ့် တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ စာတွေကိုတော့ 'message'
တစ်ခုချင်း ဖွင့်ဖတ်မှ ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါဟာ folder ရဲ့အားနည်းချက်ပါ။ 'Label' ကတော့
'conversation' အပေါ်ကို အမှီပြုပြီးတည်ဆောက်ထားတဲ့ အတွက်နေရာမျိူးစုံကနေ message
-Label ကိုဖန်တီးဖို့ နည်းလမ်း ၂ ခုရှိပါတယ်။ creat label ကိုတည်ဆောက်ပြီး filter ထားကာ
ဖန်တီးနိုင်သလို message တွေကို ဖတ်ရင်းနဲ့ 'apply label' ဆိုတဲ့ ညာဘက် အောက်နားက box
ကို click လုပ်ပြီး လည်းဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
- မိသားစု၊ဟာသ၊ အချစ်စတဲ့ folder များတည်ဆောက်ထားတဲ့ အခါမှာ မိသားစုဝင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့
အမေ့ဆီကနေ ဟာသ letter လေးတစ်စောင် ရနိုင်သလို ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ဖို့ စာတစ်စောင်
လည်းရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ folder ကတော့ သီးသန့်ခွဲခြားထားမှာဖြစ်ပြီး label မှာတော့ အဲဒီဟာသ
message ကို မိသားစုနဲ့ ဟာသ label တွေထဲမှာ ရှိနေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကွားခြားချက်သိပ်မများပေမဲ့
label နဲ့ folder တို့ရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုကတော့ ကွဲလွဲပါတယ်။
မှတ်စုတို (Nodes) များပြုလုပ်ခြင်း
on 30th March 2010, 12:49 pm by ET
Gmail မှာ note.google.com ဆိုတဲ့ feature တစ်ခုကိုလည်း
1. Contact မှာ 'Notes' ဆိုတဲ့ အမည်တစ်ခုကို ဖွဲ့ပါ။
2. Email လိပ်စာမှာ သင့်နာမည် +Notes@gmail.com ပေးပါ။
3. Label မှာ notes ဆိုတဲ့ Labels တစ်ခုဖွဲ့ပါ။
4. Settings မှာ filter တစ်ခုတည်ဆောက်ပါ။ to ဆိုတဲ့ field မှာ
သင့်နာမည် +Notes@gmail.com ဟုရိုက်ပါ။ Skip the inbox ကို
အကျိုးသက်ရောက်မှုအနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ gmail ကို online storage အနေနဲ့
သုံးနိုင်ပြီး ဘယ်နေရာကမဆို သင့်နာမည် +Notes@gmail.com ဆိုတဲ့ နာမည်
ဆီကို ကိုယ့်ရဲ့မှတ်စုမှတ်ရာလေးတွေကို ထည့်ထားလို့ရပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့
Notes label ထဲမှာ မှတ်စုတိုလေးတွေ သီးသန့်ထားနိုင်တဲ့အတွက် အထူးအထွေ ရှာဖွေနေ
စရာမလိုတော့ပါဘူး။ images တွေကို စုဆောင်းချင်တဲ့လူတွေအတွက် အသုံးဝင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို စာပြန်ပို့ခြင်းလည်းစမ်းသပ်နိုင်ပါတယ် ။
1. compose Email ကို click နှိပ်ပါ။
2. to ဆိုတဲ့ကွက်လပ်မှာ Notes ရိုက်ပါ ။
(ဒါဟာ contact ထဲမှာဖွဲ့စည်းတဲ့ Notes ကို လူနာမည်အနေနဲ့ အသုံးပြုလိုက်တာပါ။
Quick contact တစ်ခုအနေနဲ့ tip-1 မှာပြောပြခဲ့ပြီင်္းပါပြီ။ ဒါကြောင့် Notes က
@gmail.com ခံမနေတော့ဘဲ အင်ဂျင်ဟာ Notes ဆိုတဲ့ လူကိုလိုက်ပြီး အဆုံးမှာ
ကိုယ့် Gmail box ထဲကိုရောက်လာပါလိမ့်မယ် ။